Ama-pod pod, ekhofi asheshayo ne-herbal - ikhekhe le-7000 Acquedolci Messina
Izimbotshana zekhofi, i-tee yemithi esheshayo - ye-7000 ye-Acquedolci
Khofi kuwo wonke amakha ayo anesihloko.
Kubo bonke abathandi be Izimbotshana zekhofi e i-capsule di I-Acquedolci, I-Sant'Agata di Militello neCapo d'Orlando, okuqinisekisiwe okuhlongozwe ngu 7000 Ikhofi inikeza isiphakamiso esicebile sokuhlanganiswa kwezinhlamvu okusanhlamvu okuhle, ngaphezu kwalokho tisane nemikhiqizo esheshayo ekhethiwe kwimikhiqizo eyaziwa kakhulu emkhakheni.
Ikhofi emaphodeni nasemaphaketheni anephunga elimnandi kunayo yonke kanye nokuxutshwa kwe-Acquedolci
Ama-Waffles kanye nama-Caps ezinikeza okuhle kakhulu izingxube futhi inhlanganisela enhle kakhulu ikhofi yekhofiNazi ezinye zeziphakamiso ezinesihloko ukuthi 7000 Ikhofi unikeza isikhangiso I-Acquedolci, iMessina. Isikhungo sinikeza okunezinhlobonhlobo ezinkulu ze amaphilisi kanye nemidumba kukhethelwe izici ezithile ezenza ngamunye hlanganisa okukhethekile futhi ocebile ku profumi e ukunambitheka akunakuqhathaniswa. Phakathi kwemikhiqizo eminingi ekhona esitolo, uzothola owaziwa kakhulu nocwengisiswe kakhulu. Phakathi kwalezi: IlMan Coffee, Verzì, Caffitaly, ILavazza neLavazza Blu, I-Zito, i-Aroma Light, iBorbone, iLollo Caffè, i-Uno System, iLeopard Ngaphezu kwe ikhofi in ama-waffles e i-capsule, futhi iyatholakala tisane, wena, imishini yekhofi e inyibilika. Ngemuva konyaka owodwa kuphela wokusebenza, lesi sitolo sesiphenduke indawo yokukhomba kuyo yonke indawo I-Acquedolci kanye nomasipala abangomakhelwane.
Khofi kumakhompiyutha kanye nemidumba ebamba futhi igcine lonke iphunga lakho
Le Capsule zingamabhokisi amancane cylindrical yakhelwe ukugcina yonke iphunga kanye nephunga le isiphuzo esimnyama ethandwa kakhulu emhlabeni. The ikhofi okuqukethwe kuzo kuyahlukaniswa futhi kufakwe uphawu ngobunyoninco, ngendlela yokuthi kugcinwe konke kungenjalo izakhiwo ze-organoleptic. Izinhlobo eziningi i-capsule wesitolo nazo ziguqulwe yi ama-waffles, olunye uhlelo olusheshayo nolusebenzayo lokuphuza iziphuzo ezinhle ngokushesha ikhofi. the ama-waffles ziqukethe ukugoqa okuthambile, okufana kakhulu nokwamathebhu we wena e tisane. the Ama-Waffles futhi i i-capsule Iziphakamiso ngakho-ke zibonisa indlela elula nesebenzayo kulabo abafuna ikhefu elimnandi nelinephunga elimnandi. Okubonakalayo okubanzi kwe itiye lamakhambi, opholile, i-detox e ukudonsa. Umnikazi, uMichele Fallo, ungumthandi omkhulu we ikhofi e tisane, uzokwazi ukululeka imixube, i-waffles futhi i imishini yekhofi ilungele kangcono okuthandayo.
Ikheli: I-Via Ricca Salerno, 36
Umakhala ekhukhwini: 388 8864873
Ifasitela lesitolo: www.sisu.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03553380837